सर्वश्रेष्ठ No No Deposit Bonuses - UK 2021 ✅
Home » क्यासिनो बोनस » निक्षेप बोनस
सर्वश्रेष्ठ कुनै जम्मा बोनस
फ्रि मनी नो डिपोजिट के हो?
साइन अप बोनस कुनै निक्षेप के हो?
स्वागत बोनस निक्षेप के हो?
जम्मा बोनस कोडहरू के हो?
फ्रि स्पिनहरू कुनै डिपोजिट के हो?
नि: शुल्क स्लटहरू निक्षेप के हो?
नि: शुल्क क्रेडिट कुनै डिपोजिट के हो?
नि: शुल्क चिप्स निक्षेप के हो?
कुनै जम्मा बोनसहरू जुन प्रत्यक्ष क्यासिनो खेलहरूमा लागू हुन्छन् धेरै दुर्लभ हुन्छन् तर हामी तिनीहरूलाई समय-समयमा यहाँ देखाउनेछौं। यस पृष्ठमा हामीले देखाउने बोनसहरू प्रायः नि: शुल्क स्पिनहरू हुन् जुन लाइभ डिलर गेमहरूको लागि नमिल्दो उपयोगका छैनन्। तर अझै, यी बोनसहरूले नयाँ क्यासिनो प्रयोग गरीरहेका छन्।
A निक्षेप बोनस प्राय: द्वारा प्रस्ताव गरिएको छ अनलाइन क्यासिनो नयाँ खेलाडीहरू आकर्षित गर्न। बोनस दाबी गर्न खेलाडीले तिनीहरूको खातामा जम्मा गर्नु पर्दैन। केहि केसहरूमा, यो बोनस वफादार खेलाडीहरूको लागि प्रस्ताव गरिएको छ जो लामो समयदेखि क्यासिनोको साथ छन्।
यो एक उत्तम बोनस उपलब्ध छ किनभने त्यहाँ बोनस स collect्कलन गर्न कुनै शर्तहरू छैन। बोनस निःशुल्क नगद, नि: शुल्क स्पिन वा व्यक्तिगत क्यासिनोद्वारा प्रस्ताव गरिएको प्रचार हुन सक्छ।
यो एउटा हो सबै भन्दा राम्रो अनलाइन क्यासिनो बोनस । जब प्लेयरले नयाँ खाता खोल्दछ वा यदि उनीहरूसँग पहिले नै खाता छ भने, तिनीहरूले दावी गर्न सक्दछन् निःशुल्क पैसा अनलाइन क्यासिनोबाट। खेलाडीले यो पैसा क्यासिनोले प्रस्ताव गरेको कुनै पनि खेल खेल्न प्रयोग गर्न सक्दछ।
केहि नयाँ खेलहरूका विवरणहरू सिक्न वा कुनै वास्तविक नगद जोखिम बिना मनपर्ने आनन्द लिनको लागि यो उत्कृष्ट अवसर हो। यदि खेलाडीले जित्यो भने तिनीहरू वास्तविक नगद जित्दैछन्। को राशि नि: शुल्क नगद विशिष्ट बोनस मा निर्भर गर्दछ।
को साइन-अप बोनस नयाँ अनलाइन क्यासिनो के प्रस्ताव गर्दैछ भनेर हेर्नको लागि यो प्रभावकारी तरीका हो। सबै खेलाडीहरूले बोनस प्राप्त गर्न के क्यासिनोको साथ एक नि: शुल्क खाताको लागि साइन अप गर्दछ। धेरै जसो केसहरूमा, खेलाडीले खाता खोल्दा प्रमाणिक भुक्तान विधि प्रदान गर्नुपर्नेछ।
बोनसले नि: शुल्क नगद प्रदान गर्दछ प्लेयरलाई उपलब्ध खेलहरू जाँच गर्न सक्षम गर्न। यो क्यासिनोले खेलाडीको चासो लिनको लागि प्रस्ताव गर्ने धेरै बोनसहरू मध्ये एक हो। एक पटक खेलाडी क्यासिनोसँग परिचित भएपछि यो धारणा हो, तिनीहरू नियमित खेलाडी हुनेछन्।
A स्वागतम बोनस यो जस्तो देखिन्छ। यो नयाँ खेलाडीहरूलाई स्वागत गर्ने अनलाइन क्यासिनो तरीका हो। एक पटक खेलाडीले खाता खोल्नुभयो, तिनीहरूलाई नगद बोनस प्रदान गरिन्छ। केहि केसहरूमा, यो नगद केवल खास खेलहरू जस्तै स्लटहरूको लागि हो।
खेलाडीले यस बोनसको लागि योग्य हुन कुनै वास्तविक पैसा जम्मा गर्नु पर्दैन। अनलाइन क्यासिनो अत्यन्त प्रतिस्पर्धी छन्। स्वागत बोनस मूल रूपमा नयाँ खिलाडीहरूको लागि एक अर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने माध्यमको रूपमा सिर्जना गरिएको थियो। यस बोनसको विवरण क्यासिनोबाट क्यासिनोमा फरक हुनेछ।
बोनस कोड विशेष छन् र बोनस दावी गर्न आवश्यक छ। यी व्यक्तिगत क्यासिनो द्वारा प्रस्ताव गर्न सकिन्छ, क्यासिनो समीक्षा साइटहरूमा अनलाइन वा विशेष पदोन्नति मार्फत। प्लेयर उपलब्ध कोडहरू मार्फत हेर्छ र निर्णय गर्दछ जुन उनीहरूलाई सबैभन्दा उत्तम मनपर्दछ।
खेलाडी अनलाइन क्यासिनो भ्रमण गर्दछ र बोनस प्राप्त गर्न कोड प्रविष्ट गर्दछ। धेरै जसो केसहरूमा यो क्यासिनोको लागि क्यासियरको पृष्ठमा गरिन्छ। बोनस निःशुल्क स्पिन, नगद, आदि को लागी हुन सक्छ। फाइदा भनेको प्लेयरले बोनस दाबी गर्न कोष जम्मा गर्नु पर्दैन।
यो बोनस खेलाडी दावी गर्न सक्षम गर्दछ निक्षेप बिना नै फ्री स्पिनहरू । स्पिनहरूको संख्या भिन्न हुन्छ र बीस, पचास वा १०० नि: शुल्क स्पिनहरूको लागि हुन सक्छ। यी स्पिन्स स्लट खेल खेल्न प्रयोग गरिन्छ।
यो बोनस सामान्यतया विशिष्ट स्लटहरूको लागि प्रस्ताव गरिन्छ। यो नयाँ खेलतर्फ ध्यान आकर्षित गर्न, अवस्थित खेलको लोकप्रियता बढाउन वा नयाँ खेलाडीहरूलाई विशेष क्यासिनो भ्रमण गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्दछ। यस प्रकारको अन्य बोनसको रूपमा, प्लेयर नि: शुल्क स्पिनहरू दाबी गर्न नगद जम्मा गर्नु आवश्यक छैन।
यो नि: शुल्क स्लट बोनस विशेष गरी या त प्रदान गर्दछ नि: शुल्क नगद स्लट खेल खेल्न वा निशुल्क खेल निक्षेपको आवश्यकता बिना नै विशिष्ट स्लटहरूमा। यस प्रकारको बोनस दाबी गर्न खेलाडीसँग या त अनलाइन क्यासिनोमा नि: शुल्क खाताको लागि साइन अप हुनै पर्छ।
फ्रि स्पिनहरू सामान्यतया सुविधाको लागि डेस्कटप, ट्याब्लेट वा स्मार्टफोनमा खेल्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो नयाँ खेलहरू खेल्नको लागि उत्कृष्ट अवसर हो। जब प्लेयर निःशुल्क स्लट स्पिन प्रयोग गर्दैछ, तिनीहरू वास्तविक पैसा जित्न सक्छन्।
नि: शुल्क क्रेडिटहरू व्यक्तिगत क्यासिनोद्वारा प्रदान गरिएको भर्चुअल क्रेडिटहरू हुन् जुन खेलाडीलाई वास्तविक पैसा बिना शर्तमा खेलहरूको मजा लिन मद्दत गर्दछ। को नि: शुल्क क्रेडिट कुनै जम्मा छैन बोनसको सरल अर्थ भनेको यी क्रेडिटहरू प्लेयरलाई उनीहरूको खातामा धन जम्मा गर्न वा नयाँ खाता खोल्नको लागि बिना नै प्रदान गरिन्छ।
यसले खेलाडीलाई क्यासिनोले के प्रस्ताव राख्छ भनेर हेर्न, उनीहरूलाई सबैभन्दा आकर्षक लाग्ने खेलहरू खेल्ने र तिनीहरूलाई क्यासिनो मनपर्दछ कि भनेर निर्धारण गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ। यदि खेलाडीले फर्कने छनौट गरे, तिनीहरूसँग पहिले नै खाता छ। तिनीहरू खेल सुरू गर्न के गर्नु पर्छ सबै एक समयमा जम्मा गर्नु हो।
चिप्स सामान्यतया ब्ल्याकज्याक, केनो, स्क्र्याच कार्डहरू, भिडियो पोकर, क्रेप्स, बिंगो, रूलेट र स्लटहरू अनलाइन क्यासिनोमा खेल्न प्रयोग गरिन्छ। को नि: शुल्क चिप्स निक्षेप बोनसले खेलाडीहरूलाई निश्चित संख्याको चिपहरू प्रदान गर्दछ जुन उनीहरूले यी खेलहरू खेल्न प्रयोग गर्न सक्दछन्।
यो उत्कृष्ट पदोन्नति मानिन्छ किनकि खेलाडीको क्यासिनो खेलहरूमा उनीहरूको खातामा नगद जम्मा नगरी व्यापक पहुँच छ। यदि खेलाडीसँग खाता छैन भने, तिनीहरूले बोनस दाबी गर्न क्यासिनोको साथमा नयाँ खाता खोल्नु पर्छ।